ပူဇော်ပွဲမှဆုပေးသံများနှင့်မိမိပေးလိုတဲ့ဆုပေးသံများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ပူဇော်ပွဲမှဆုပေးသံများနှင့်မိမိပေးလိုတဲ့ဆုပေးသံများ	16
Posted by aye.kk on Mar 5, 2015 in My Dear Diary | 16 comments
သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲများကို နေရာအများတွင် ပြုလုပ်ကြပါသည်။
ထိုပူဇော်ပွဲများတွင် အများအားဖြင့်သာ ဆုများပေးကြသည်ကို သိလိုမှတ်လိုပါသည်၊ ရှေးလူကြီးများ ဆုပေးကြတာ
ထိုဆုထက် အဆင့်မြင့်မြင့် ပေးကြတာကတော့-
ဘယ်ဘက်က တစ်ဆုပ်ကြဲ ညာဘက်က တလှည်းဝင်ပါစေ၊
ပဒုမ္မာရွှေကြာပန်းကဲ့သို့ ပွင့်လန်းတဲ့ ကိုယ် ဖြစ်ပါစေ၊
ပိန်းကြာဖက်ပေါ် ရေမတင်သကဲ့သို့ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းကြပါစေ၊
မရှိစကါး၊ နားမှလေသံမျှ မကြားရပါစေနှင့်၊
စိတ္တသုခ၊ ကါယသုခနှင့် ပြည့်စုံပါစေ၊
အလှူရေစက်လက်နဲ့ မကွာ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်ကြပါစေ၊
ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ယခုခေတ်ကြတော့ လူကိုကြည့်ပြီး ဆုပေးကြပါသည်။
အားကစါးတွင် နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ရွှေတံဆိပ်များများ ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေ။
မှန်းထားသည့် လူရည်ချွန်ဆုကို လွယ်လွယ်နှင့်ရပါစေ ။
ဒါကတော့ မိတ်ဆွေဘဘကြီးရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားထားတာပါ ၊
အခုကိုယ်က လူကြီးနေရာေ၇ာက်လာပြီ ၊ သားတွေသမီးတွေ မြေးတွေက အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ ကိုယ့်ထံလာပြီး ပူဇော်ကန်တော့ ခံတဲ့
အရွယ် တဖန်ရောက်ခဲ့ ပြန်တာမို့ နှစ်သက်ရာ ဆုပေးသံလေးများ နားပန်ဆင်နိုင်ရအောင် ၊ ဂေဇတ် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အတွက်သိရအောင်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ် ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ သားသမီးတွေရဲ့ ပူဇော်ကန်တော့ကိုခံရတိုင်း-
ယခုဘဝမှာပင် လျှင်မြန်စွာ မဂ်ဖိုလ်-နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် ပြုနိုင်ပါစေ၊
သာသနာပြုနိုင်ပြီး တရားထူးတရားမြတ် ရနိုင်ပါစေ၊
သူတော်ကါင်းအကျင့်မြတ်ဖြစ်တဲ့ မဟာသတိပဌာန်တရားကို ပွားများကျင့်ကြံ အားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေ ဖြစ်ကြပါစေ ဟုသာ…။။
Alinsett@Maung Thura says: ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင်…
ဆုတောင်းမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဆု​တောင်းတယ်​
​ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်​စုံတယ်​ဆိုတာ ၂ဦး ၂ဖက်​ ကိုယ်​ကျင့်​တရား နဲ့ သီလ ပြည့်​စုံမှတဲ့ ။
ကျ​နောက​တော့ ဆု​ပေး ဆုယူ ကိစ္စထက်​ လက်​​တွေ့ ကျိုးစား အားထုတ်​ လုပ်​လိုက်​တဲ့ အကျိုးမမြတ်​ကိုပဲ တန်​ဘိုးထားတယ်​ ။
aye.kk says: ဆုပေးသံနဲ့ဆုတောင်းတာ
ပါရမီပြည့်ဝတဲ့၊သီလစင်ကြယ်နေတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ မိမိတို့ရဲ့အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီအတိုင်း ဆုတောင်းကြပါတယ်။
ပုထုဇဉ်တွေကတော့ အကျိုးမျှော်ကိုးပြီး ဆုတောင်းကြပါတယ်။ မတူပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှ ၊ရိုသေသမှုအရ ၊မာန်ကိုလျှော့ချပြီး
ကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ဂုဏ်ဝါကြီးရင့်သူတွေကို ၊ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ဂုဏ်ဝါနိမ့်ကျသူတွေက
မြတ်နိုးထိုက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့အနေနဲ့ ပူဇော်ကန်တော့ကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် ။
မေတ္တာပေမ-ကတော့ ရယူလိုခြင်းအလျှင်းကင်းပါတယ် ။ မေတ္တာဆိုတာ ဘယ်လောက်ပေးပေး ပေးလို့မဝပါဘူး။
မေတ္တာပေမတရားအရ ပေးတဲ့ဆုပေးသံများပါ ။ မေတ္တာစိတ် သပ်သပ်မျှနဲ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆုပေးတာနဲ့ဆုတောင်းတာ ကွဲပြားခြားနားကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါရစေ။။
naywoon ni says: ဒါ​ပေမယ့်​ဗျာ တရားပွဲ​တွေမှာ သံပြိုင်​ ရွတ်​ကြတဲ့ ဆု​တောင်းကို​တော့ နားထဲ သိပ်​မ၀င်​ဘူး ။
ဆရာ​တော်​ ​ဘေးရန်​ကင်းပါ​စေ ” ဆိုတာ ​လေ ။ ဆရာ​တော်​က ဘာလုပ်​​နေလို့ ​ဘေးရန်​ကင်းပါ​စေ ဆု​တောင်း​ပေး​နေရသလဲ ​မေးစရာ ဖြစ်​​နေတယ်​ ။ သာသနာ့ ၀န်​ထမ်း သာသနာ့ အလုပ်​လုပ်​​နေတဲ့ သူက သူ့အလိုလိုကို ​ဘေးရန်​ကင်းပြီးသားလို့ပဲ ယူဆတယ်​ ။
aye.kk says: အထင်နဲ့အမြင်ဆိုတာ
ခန္ဓာဝန်ရှိနေသမျှ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာ ရှိနေပါတယ် ၊ ဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတာ သဘာဝကျပါတယ်
ဒါက ကျမအမြင်ပါ။ ခန္ဓာရှိနေသမျှ ဝဋ်ကြွေးမကုန်စင်နိုင်သေးပါ ။
kai says: မြန်မာပြည်အနာဂတ်လှလာဖို့…ဆိုရင်.. အဲဒီအသက်ကြီးတာနဲ့.. ပူဇော်ခံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို(လည်း)..
ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာဖုံးတပ်.. လူ့အတန်းအစား… ခွဲပစ်နေတာလို့.. ဆိုချင်မိတယ်….။
ရှေးအယူကတော့… ခေါင်းသုံးလုံးရှိသောသူကိုဆည်းကပ်ပါ ..တဲ့..
တိုင်းပြည်မှမဟုတ်.. တဦးချင်းစီကလည်း.. ဘ၀တိုးတက်ချင်လျှင်…
လူသားဟူသမျှ.. တန်းတူညီမျှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: မှံလိုက်လေ ဦးမာမွတ်… ကျောင်းဆရာဂို ဝေဖန်ရင်ဗဲ အဝီဇိဇောက်ထိုး ဆင်းရမလိုလို… ဖြစ်နေဒါ ဖြစ်နေ..ဒါ မြန်တျန့်ပျီဂျီးမှာ…။ ဆရာအခံ လှံစူးလို့ ပြောသူကရှိသေး.. ဟိုက ဖရီးသင်ပေးတာ.. ဒီက လခယူသင်တာ။ ကောင်းသူပါတယ်ဆိုလည်း အခြားအလုပ်တွေမှာလဲ ကောင်းသူ တဘုံဂျီး။ ခပ်သဗျာ… အဲလိုလူတွေကပဲ ဘွားဒေါ်ဂျီး သမဒဖြစ်တော့မည် ထင်နေသဗျ။
manawphyulay says: ဘာလဲ တဂျီးက တစ်နေ့ ပုဆိုးသုံးထည် လှဲဝတ်တဲ့သူလားဟင်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ပေးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်ပါစေ။
လေ စိုက် ပြီး ဆုယူရတာမြန်းးး
အထက်က လူတွေ နှယ် ချေးများချက်။
aye.kk says: သူကြီး အသက်ကြီးတာနဲ့ပူဇော်ခံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့ အမွေအနှစ် အစဉ်အလာပါ။
ကျမသိတဲ့အသိနဲ့ ပြောပြရရင် ဆည်းကပ်တာ ယုံကြည်လို့သာ ဆည်းကပ်တာပါ
မိတ်ဆွေကေါင်းတွေကိုချဉ်းကပ်တာမျိုးက ကန်တော့စရာမလိုပေမယ်၊့ ဂေါင်းသုံးလုံးရှိသောသူဆည်းကပ်ပါ ဆည်းပူးတယ်
ဆိုတာ ပူဇော်ခံသင့်လို့ ပြောတာလို့မှတ်သားပါတယ်။
kai says: အသက်ကြီးလာသူတွေကို.. ထိုက်သင့်တဲ့..အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့..ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ရမှာကနေပြီး.. အပူဇော်ခံဘ၀..ထေရာကြီးတွေက.. ချွန်တွန်းပို့ခံလိုက်ရတယ်လို့.. မြင်မိပါတယ်..။
ဗုဒ္ဓလက်ထက်က.. ရဟန်းသံဃာကိုတောင်မှ.. အသက်ကြီးသူ..ငယ်သူ..စသဖြင့်အသက်နဲ့မခွဲ.. သင်္ကန်းအရင်ဝတ်သူ..နောက်ကျသူဆိုတဲ့..၀ါနဲ့ခွဲတာမို့..
တကယ်တော့.. ဆည်းကပ်တာနဲ့.. ပူဇော်တာ..တော်တော်ကွာမှာပါ..။အပူဇော်ခံဆိုပြီး. ရှေ့ခုံမြင့်ပေါ်ထိုင်ခိုင်း.. ထိုင်ကန်တော့.. သူပြောဟော..ဆုပေးတာနားထောင်.. ဆုတောင်း/ဆုယူဆိုတာမျိုးဖက်ရောက်သွားလို့ပါ..။
အသက်ကြီးရင်..အသိသညာတွေလည်းချို့ယွင်း.. အယ်လ်ဇိုင်မားတွေရ.. အဲလိုသူပြောစကားသွားနားထောင်နေမှ.. အောက်ကပူဇော်သူတွေ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ကုန်မပေါ့..။
ဖြစ်သင့်တာက.. အသက်ကြီးသူရဲ့..ခန္ဓာကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြည့်.. ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်ကောင်းသေးရင်.. အရင်သိတွေ့ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမေး..။ ချည်းကပ်ဆွေးနွေး..။ အဲလိုဖြစ်ရမှာပါ..။
အသက်သိပ်ကြီးနေရင်တော့.. သွားမေးနေခါမှ နှိပ်စက်ရာရောက်သမို့.. လိုတာလေးတွေဖြည့်ပေး.. ကူညီ..။ အဲလိုဖြစ်ရမှာပါ..။
ဒါတောင်. ခေါင်း၃လုံးရှိသူကိုဆည်းကပ်ပါဆိုတဲ့…ဒီအတွေးအခေါ်ဆိုတာမျိုးက.. ရှေးရှေးဂွမ်တိ.. စာအုပ်..စာပေနဲ့…အင်တာနက်.. မရှိခင်..မဖွင့်ဖြိုးခင်.။ ရယူခက်တဲ့ခေတ်တွေမှာပါ..။
ဒီခေတ်မှာ.. ယူအက်စ်.အင်္ဂလန်..ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေနဲ့..အတွေ့အကြုံရှိသူတွေရေးသားပြုစု..စုဆောင်းထားတဲ့.. စာကြည့်တိုက်တွေ.. စာအုပ်တွေကို..အင်တာနက်က..စက္ကန့်မခြားယူလို့ရနေမှတော့..ဒါတွေဒါတွေတောင်မလို..ပေါ့..။
တကယ်တော့.. အသက်ကြီးတိုင်း…ထိုင်ကန်တော့ပူဇော်နေကြတာ.. မြန်မာထေရာဝါဒတိုင်းပြည်မှာသာ.. အဓိကဖြစ်နေတာပါ…။
တကယ့်ဗုဒ္ဓအတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာတော့.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ.. အသက်ကြီးသူတွေအပေါ်.. လေးစားသမှုထားတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး. ပညာသည်တချို့ကအောက်ကအတိုင်းရှင်းပြတယ်..။
ထေရ၀ါဒရဲ့.. အင်္ဂလိပ်လို..ဘာသာပြန်က.. Theravada Buddhism, the “Doctrine of the Elders,” ဒီလိုတဲ့..။ နောက်တခုက.. အနေ န္တာအန န္တငါးပါး ဆိုတာ.. ဘုရားဟောမဟုတ်ပါကြောင်း…နော..။
Respecting parents is one of the most important aspects of Buddhism.
Buddhism is about overcoming suffering in the material world, so that the individual can escape the cycle of rebirth and attain nirvana — the ultimate state of blessedness. Buddhism teaches that old age isatime of great suffering, and since we all age, the young must treat the elderly, particularly their parents, with suitable respect.
Another reason for Buddhist respect for the elderly is the idea that people suffer in their old age. Buddhism is about overcoming suffering and Buddhist sutras (sermons of the Buddha) teach that old age isatime of great suffering when the individual’s body begins to decay and the mind becomes confused. Since Buddhism also teaches compassion for the suffering of others, young Buddhists have an obligation to respect and help the elderly.
According to Buddhism, the main way of showing respect for the elderly is to provide for their needs. In many cases, parents live with their children and may help raise their grandchildren. Young people should also take care of their parents’ financial and other personal needs. In addition, sinceasenior citizen has wisdom accumulated overalong lifetime, younger people can show respect by listening to the advice of their elders. Buddhists also extend the idea of filial piety to all senior citizens.
Prolonged lifespans have changed the way senior citizens live, and this has affected the way Buddhists practice respect for the elderly. Since many people are healthier for longer, they want to remain independent and work long into their old age. Some Buddhist temples have begun organizing clubs to bring senior citizens together with younger people, and many Buddhist organizations celebrate special days intended to focus attention on respect for the elderly.
aye.kk says: အသိ(၆)မျိုးရှိပါတယ်
kai says: ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပါ..အရီးအေးရေ..။
ကွန်ဆာဗေးတစ်(ရှေးစွန်းစွဲ)တိုင်းပြည်ကနေ.. လစ်ဗရယ်ဒီမိုကရက်(လွတ်ပြန့်စွဲ)လွှမ်းမိုးတဲ့တိုင်းပြည်ရောက်.. လူတယောက်အမြင်ရယ်လို့ပဲ.. ထားပါနော..။
တချို့ကိစ္စတွေက.. Agree to disagree.
..လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိပါကြောင်းနဲ့.. စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်..ခွင့်လွတ်ပါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ချင်ပါတယ် မအေးရေ။
ဘ၀တစ်ခုအဆုံးသတ်ချိန်ကိုတွေးပြီး သံသရာကိုလည်း ကြောက်တယ်။
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ က တော့ မယ်ကန့်လန့် မို့ အပါတ်စဉ် အဖေ အမေ နဲ့ စကားပြောပြီး တိုင်း သူတို့ ပေးတဲ့ ဆု ကိုလဲ နာယူ။
ကိုယ်ကလဲ သူတို့ ကို ပြန်ဆုပေးတယ်။
ဟိုဘက်ကလဲ ငါ့သမီး ပေး တဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်ပါစေတဲ့။
ကွကိုယ်တော့ ဟုတ်နေတာဘဲ။ ဟိ။
ပြောသာပြောတာ ဒီ အရွယ်ကြီး ရောက်မှ စာမေးပွဲ ဖြေ ရမဲ့ နေ့ ဆို
အမေ့ ကို ငယ်ကလိုဘဲ ဆုတောင်းပေးပါ လို့ ပြောတာ အကျင့်ဖြစ်ပြီး
အဲဒီကနေ Willpower ကောင်းကောင်း ရ တယ်လို့ ယုံ သလိုဖြစ်တုန်းပါဘဲ။
စိတ္တံ ရက္ခေထ မေဓါဝီ။
စိတ္တံ ဂုတ္တံ သုခါဝဟံ။
စိတ္တံ-မိမိစိတ်ကို။ ရက္ခေထ-အမြဲမပြတ်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် စေါင့်ရှောက်ကြကုန်ရာ၏၊